ယောက်ျားလေးရဲ့ windbreaker SH-916
Style No .: SH-916 အရောင်: ရေတပ် / အဝါရောင်အရွယ်အစား: 8-16A အထည်: Shell: 100% polyester ရက်ထည်; ခန္ဓာကိုယ် / ပါးပျဉ်းနံရံ: 100% polyester ကွက်; လက်ကြောနံရံ: 210T taffeta ဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic၊ Reverse nylon zipper, ပလတ်စတစ်ဇစ်အသွင်အပြင်: Cylindrical zipper သွားမှတ်ချက်များမှတ်ချက်များ: ရောင်ပြန်ဟပ်ပုံနှိပ်ခြင်း၊
ယောက်ျားလေးရဲ့ windbreaker HK-8535
Style No .: HK-8535 အရောင်: ရေတပ်အရွယ်အစား: 8-16A အထည်: Shell: 100% polyester ရက်ထည်; နံရံ - 100% polyester single jersey, 150gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း: elastic, woven tape, ပြောင်းပြန်ရေစိုခံနိုင်လွန် zipper မှတ်ချက်များ - ပန်းထိုးပဲ့ပြင်ခြင်း
Style No .: SH-684 အရောင်: အဖြူ / အနက်ရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: တီရှပ် - 100% polyester jaquard, 170gsm; ဘောင်းဘီတို - ၁၀၀% poliester pique, 150gsm ဆက်စပ်ပစ္စည်း - elastic tape မှတ်ချက်
စတိုင်နံပါတ် .: SH-668 အရောင်: ကြွေထည် / အဖြူရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၇၀% ဝါဂွမ်း ၂၅% polyester 5% spandex သိုးမွေး၊ ၂၃ ဂရမ် g လက်ဆောင်
Style No .: SH-667 အရောင်: အနက်ရောင်အရွယ်အစား: 4-12A အထည်: ၇၀% ဝါဂွမ်း ၂၅% polyester 5% spandex သိုး၊